Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. #सुन – Janata Live
काठमाडौँ– सुनको मूल्य यो साता ‌ओरालो लागेको छ । साताको पहिलो दिन प्रतितोला एक लाख दुई हजार आठ सयमा किनबेच भएको छापावाला सुन साताको चौथो दिन बुधबार ९९ हजार तीन समय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । साताको पहिलो दिनको तुलनामा दोस्रो दिन सोमबार आठ सय रुपैयाँले घटेर एक लाख दुई हजार तीन सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । यसैगरी सोमबारको तुलनामा मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य एक हजार आठ सय रुपैयाँले घटेर एक लाख पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको संघले जनायो । मंगलबारको तुलनामा बुधबार तोलामा एक हजार दुई सय रुपैयाँले घटेर ९९ हजार तीन सय रुपैयाँमा...
काठमाडौं– साताको चौथो दिन बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएकोमा बुधबार चार सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९२ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको हो । बुधबार छापावाल सुन प्रति १० ग्राम ७९ हजार ४४५ रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी, तेजाबी सुन प्रतितोला ९२ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुन प्रति १० ग्राम ७९ हजार ४५ रुपैयाँ कायम भएको महसंघले जनाएको छ । बुधबार चाँदीको मूल्य स्थिर भएको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार २५० रुपैयाँ...
सुनको भाउ एक सय रुपैयाँले बढ्यो, चाँदीको कति ?
काठमाडौं– शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य एक सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका गत बिहीबार प्रतितोला ९० हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज बिहीबार एक सय रुपैयाँले वृद्धि हुँदै ९० हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको हो । यस्तै, आज तेजाबी सुनको मूल्य समेत एक सय रुपैयाँले नै वृद्धि हुँदै ९० हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । तर, यता चाँदीको मूल्य भने गत बिहीबारको मूल्य पुनः १० रुपैयाँले घट्दै शुक्रबार प्रतितोला एक हजार १९५ रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । गत बिहीबार बजारमा चाँदी प्रतितोला एक हजार २०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको...
सुनको मूल्यमा स्थिरता
आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा स्थिरता कायम भएको छ । गत शुक्रबार प्रतितोला ९१ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज आइतबार पनि सोही मूल्य कायम हुँदै कारोबार भएको हो । यस्तै, आज यता तेजाबी सुनको मूल्य समेत गत शुक्रबारकै मूल्य कायम हुँदै प्रतितोला ९१ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तर, यता चाँदीको मूल्यमा भने आज तोलामा १० रुपैयाँले बृद्धि हुँदै एक हजार २१० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौंमा सुनको सिक्री लुटेर भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ
काठमाडौं– काठमाडौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–१० कपन सुनको सिक्री लुटपाट गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा गोकर्णेश्वर आरुवारी बस्ने सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी नगरपालिका–२ तातोपानी घर भएका २२ वर्षीय अन्जित सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आकाशेधारा डेरा गरी बस्ने सानु बस्नेतको सुनको सिक्री लुटपाट गरी भाग्दै गरेका उनी पक्राउ परेका हुन् । सानुले आफू बस्ने घरको गेट बन्द गर्ने क्रममा घाँटीमा लगाएको करिब २ तोलाको सुनको सिक्री लुटपाट गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा महानगरीय प्रहरी प्रभाग कपनबाट खटिएको प्रहरीले स्थानीय मानिसहरुको सहयोगमा अन्जितलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ ।
घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् आजको कारोबार
सुनको मूल्य आज तोलामा १५ सय रुपैयाँले घटेको छ। हिजो तोलामा ९४ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज ९३ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उतार चढाबका कारण सुनको मूल्य ओरालो लागेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। शुक्रबारका लागि तेजावी सुनको मूल्य ९२ हवार ९ सय रुपैयाँ खरिद बिक्री मूल्य तोकिएको छ। बिहीबार उक्त सुनको प्रतातोला कारोबार मूल्य ९४ हजार चार सय रुपैयाा थियो। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा ३५ रुपैयाँले घटेर १३ यस ४० रुपैयाँ प्रतितोला कारोबार मूल्य तोकिएको छ। रासस
बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । आज सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला ९५ हजार रुपैयाँमा र तेजाबी सुन प्रतितोला ९४ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार छापावाला सुन प्रतितोला ९४ हजार ५०० रुपैयाँमा र तेजाबी सुन प्रतितोला ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ । चाँदीको भाउ प्रतितोला १ हजार १९५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार १ हजार १८० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो ।
कति पुग्यो सुनको मूल्य ? हेर्नुहोस् आजको कारोबार
काठमाडौं । आज पनि सुनको भाउ स्थिर रहेको छ । आज छापावाल सुन प्रति तोला ९४ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार र सोमबार पनि छापावाला सुनको भाउ तोलामा ९४ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, तेजाबी सुनको भाउ प्रति तोला ९४ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदीको भाउ भने बढेको छ । आज चाँदी प्रति तोलामा १० रुपैयाँ बढेर प्रति तोला १२ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौं । आज नेपाली बजारमा सुनचाँदीकोको स्थिर रहेको छ । आज छापावाल सुन प्रति तोला ९४ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार पनि छापावाला सुनको भाउ तोलामा दुई सय रुपैयाँले घटेर ९४ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, तेजाबी सुनको भाउ प्रति तोला ९४ हजार दुई सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि स्थिर रहेको छ । चाँदीको भाउ तोलामा स्थिर रही १२ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।